कहाँसम्म चल्छ सार्वजनिक यातायात : कति दूरीलाई लामो दूरी भन्ने ?
कहाँसम्म चल्छ सार्वजनिक यातायात : कति दूरीलाई लामो दूरी भन्ने ? लामो दूरीमा के निजी गाडी चल्न पाउछन् ?
भागवत भट्टराई काठमाडौं, ८ चैत्र
सोमबारदेखि देशभरका यात्रुबाहक सवारी साधन लामो दूरीमा चल्न नपाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै १० चैतदेखि लामो दूरीका सवारीसाधन चल्नको लागि रोकिएको घोषणा गरेका हुन् ।
तर, लामो दूरी भनेको कति हो ? सर्वसाधरण अन्योलमा परेका छन् । कतिसम्मको यात्रा गर्नको लागि सार्वजनिक साधन पाइने हो भन्ने विषयमा पनि धेरै जनामा अन्योलता देखिएको छ ।
नेपालको कानुनअनुसार २५ किलोमिटरसम्मको यात्रालाई छोटो दूरी मानिन्छ भने २५ देखि २५० किलोमिटरसम्मको लागि मध्यम र २५० किलोमिटरभन्दा बढीको यात्रालाई लामो दूरीको सूचीमा राखिएको छ ।
कानुनमा स्पष्ट गरिएता पनि स्वयं यातायात व्यवसायी र यातायाता व्यवस्था विभागसमेत अन्योलमा परेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग नै अन्योलमा परेपछि शनिबार दिउँसो मन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग व्यवसायीसहित बैठक डाकिएको थियो ।
'सरकारको घोषणाअनुसार २५० किलोमिटर मात्रै चलाउन पाइन्छ‍, यसको आधार के हो ?' नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले शिलापत्रसँग भने 'उहाँहरूले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने भन्न खोजेको हो कि, लामो दूरीको चलाउने वा नचलाउने शुव्दले बुझिँदैन ।'
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल पनि केही अन्योलता देखिएको भन्दै उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको बैठकबाट टुंग्याउने बताएका छन्। 'हामीले यस विषयमा कुरा राखिसकेका छौँ, सम्भवत शनिबार नै उच्चस्तरीय समितिले अन्योलता हटाउने छ' हमालले भने ।
व्यवसायी र विभागका अधिकारीहरूले भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्रीमार्फत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गाडीमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न माग पठाएका छन् । यातायात व्यवसायी कर्मचार्यले समितिमा यातायात क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रतिनिधि नभएको कारण समस्या आएको बताए ।
यस्तै, लामो दूरीमा निजी सवारी साधन चल्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पनि अन्योलता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यात्रुबाहक सवारी साधनलाई रोक्ने घोषणा गरे तापनि लामो दूरीमा सबैलाई रोक्नु पर्ने आवश्‍यकता भएको औँल्लाइएको छ । यस विषयमा पनि शनिबार साँझ बस्ने उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको बैठकबाट निर्णय लिइने जनाकारी गराइएको छ ।
कोरोनाको संक्रमण विश्‍वव्यापी रूपमा फैलदै गएपछि नेपाल सरकारले थप कडाइ गरेको छ । सरकारले चैत ९ देखि १८ सम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ भने आवश्‍यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कनको लागि पनि अपिल गरेको छ ।
९ गतेपछि पनि नरोकिने यस्ता छन् १८ अत्यावश्यक सेवा
कोरोना भाइरस नियन्त्रणबारे के भने प्रधानमन्त्रीले (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
बैंक बन्द नहुने : पैसा झिक्न र राख्न पाइने, शुल्क छुट
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ८, २०७६, ०१:५०:००
७ दिनमा लुक्लाबाट ५१७ जनाको उद्दार, ४ दिनमा १५ सय बाहिरिए
अस्ट्रेलियन नागरिक र पीआरधारी बोकेर नेपाल एयरलाइन्स आज अस्ट्रेलिया उड्दै